Ra’iisul Wasaare Rooble oo Kulamo ka Wada Dhuusamareeb – STAR FM SOMALIA
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Maxamed Xuseen Rooble oo booqasho ku jooga Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda Galmudug ayaa halkaasi ka wada kulamo kala duwan oo intooda badan looga hadlayo arrimaha doorashooyinka iyo Amniga.
Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa magaalada Dhuusamareeb kulammo kala duwan kula yeeshay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka Galmudug oo uu kala hadlay xoojinta kaalintooda nabadgelyada, dib u heshiisiinta iyo doorashada.
Goor sii horreeysay Ra’iisul Wasaaraha ayaa waxaa uu la kulmay Xubnaha Guddiyada doorashooyinka Heer Federaal iyo Heer Dowlad Goboleed & Guddiga Amniga doorashooyinka Magaalada Dhuusamareeb, isaga oo kala hadlay dardar gelinta doorashooyinka.
Madaxweynaha Maamulka Galmudug ayaa kulamada ku wehliya Ra’iisul Wasaaraha, waxaana dhawaan la filayaa inay la kulmaan Saraakiisha Ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM, iyaga oo kala hadli doona amniga degaannada Galmudug iyo la dagaalanka Al-Shabaab.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Maxamed Xuseen Rooble ayaa kulammada kasii wadi doona Magaalada Dhuusamareeb, isaga oo intaasi kadib u gudbi doona Magaalada Gaalkacyo oo kamid ah Goobaha lagu qabanaayo doorashada Xildhibaannada Golaha Shacabka.